Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - Activities
[ , ] Ao amin'ny toko, aho tena tsara mikasika ny post-stratification. Na izany aza, tsy foana hanatsara ny kalitaon'ny ny vinavina. Hanorina ny toe-javatra izay afaka mamoaka-stratification dia afaka hampihena ny hatsaran'ny vinavina. (Fa Soso-kevitra, jereo ny Thomsen (1973) ).
[ , , ] Design ary mitarika ny tsy mety fanadihadiana amin'ny Amazon MTurk mba hanontany momba ny basy ( "ve ianao, na manao na iza na iza ao an-tokantrano, manana basy, basy na tamin'ny poleta? No fa na ny olon-kafa ao an-tokantrano?") Ary toe-tsaina manoloana ny basy fanaraha-maso ( "Ahoana no hevitrareo no zava-dehibe kokoa, mba hiarovana ny zo ny Amerikana mba manana basy, na ny hifehy basy?").
Mandra-pahoviana no mandray ny fanadihadiana? Ohatrinona ny vidin'ity? Ahoana no ny Mponina ny santionany ampitahao ny Mponina ny Etazonia mponina?
Inona no manta Tombanana ny basy mampiasa ny santionany?
Marina fa ny tsy representativeness ny santionany lahatsoratra mampiasa-stratification na teknika hafa. Ary inona no Tombanana ny basy?
Ahoana ny vinavina mampitaha ny farany tombana avy Pew Research Center? Inona araka ny hevitrao no manazava ny mifanohitra, raha misy?
Avereno ny fanazaran-tena amin'ny toe-tsaina 2-5 for basy fanaraha-maso. Inona no maha samy hafa ny hitany?
[ , , ] Goel sy ny mpiara-miasa aminy (2016) itantanana ny tsy-mety-monina fanadihadiana ahitana 49 safidy maro-attitudinal fanontaniana nalaina avy amin'ny General Social Survey (GSS) ary fidio fanadihadiana ny Pew Research Center on Amazon MTurk. Izy ireo dia hanitsy ny tsy representativeness ny tahirin-kevitra ara-mampiasa modely lahatsoratra-stratification (Mr. P), ary ampitahao ny nanitsy ny vinavinan'ny amin'ireo tombanana mampiasa mety-monina GSS / Pew fanadihadiana. Fitondran-tena toy izany koa eo amin'ny MTurk fanadihadiana sy miezaka ny maka tahaka Figure Figure 2a sy 2b amin'ny alalan'ny fampitahana ny fanitsiana tombatombana ny tombatombana avy amin'ny fihodinana farany indrindra ny GSS / Pew (Jereo ny Fanazavana Fanampiny Table A2 noho ny lisitry ny 49 fanontaniana).
Ampitahao sy mifanohitra ny vokatra ho an'ny vokatra avy amin'ny Pew sy GSS.
Ampitahao sy mifanohitra ny vokatra ho an'ny vokatra avy amin'ny MTurk fanadihadiana natao tany Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
[ , , ] Maro ny fianarana mampiasa tena tatitra fepetra ny finday angona asa. Izany no mahaliana ny mpikaroka toerana izay azo ampitahaina tena nitatitra Logged fitondran-tena amin'ny fitondran-tena (jereo ohatra, Boase and Ling (2013) ). Roa iombonana fihetsika mba hanontany momba ny miantso sy mandefa SMS, ary ny zana-kazo roa fahita fotoana dia "omaly", ary "tao anatin'ny herinandro."
Alohan'ny manangona angon-drakitra misy, izay ny tena tatitra fepetra araka ny hevitrao no tena marina? Nahoana?
Miaramila vaovao 5 ny namanao mba ho ao amin'ny fanadihadiana. Please fohifohy fintino ny fomba 5 ireo namana ireo sampled. Mety santionany io hitarika fomba manokana ao amin'ny vinavina mifanavakavaka?
Masìna ianao, anontanio azy ireo ny manaraka micro-fanadihadiana:
"Impiry no mampiasa finday mba hiantso ny hafa omaly?"
"Tena maro ny hafatra an-tsoratra no naniraka omaly?"
"Impiry no mampiasa ny finday mba hiantso ny hafa any am-parany hafitoana va izy?"
"Impiry ianao no mampiasa ny finday mba mandefa na handray SMS / SMS amin'ny farany fito andro?" Raha vao ny fanadihadiana dia tanteraka, mangataka mba hijery ny fampiasana tahiry araka izay tafiditra noho ny telefaonina na ny tolotra.
Ahoana no tena tatitra fampiasana ampitahao-mitsofoka angona? Inona no tena marina, izay kely indrindra marina?
Ary mitambatra ny tahirin-kevitra izay efa nanangona ny tahirin-kevitra avy amin'ny olona ao amin'ny kilasinao (raha manao izany asa ho an'ny kilasy). Miaraka ity dataset lehibe kokoa, mamerina anjara (d).
[ , ] Schuman sy Presser (1996) milaza fa didy no fanontaniana manan-danja roa karazana fifandraisana eo amin'ny fanontaniana: anjara-ampahany fanontaniana izay fanontaniana roa ireo miaraka amin'izay koa anivon'ny specificity (oh naoty roa kandidà filoham-pirenena); ary ny anjara-manontolo fanontaniana izay ny ankapobeny fanontaniana manaraka kokoa fanontaniana manokana (oh manontany "Ahoana no afa-po ve ianao amin'ny asanao?" arahin'ny "Tena afa-po ve ianao eo Amin'ny Fiainana?").
Izy ireo koa mampiavaka karazany roa ny fanontaniana mba vokany: tsy miovaova vokatry valin-mitranga rehefa mba misy fanontaniana tatỳ aoriana, dia nitondra akaiky kokoa (noho izy ireo raha tsy izany dia ho) ho an'ireo nomena aloha fanontaniana; mifanohitra vokatry mitranga rehefa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny valin-ho roa fanontaniana.
Mamorona roa amin'ny anjara-anjara fanontaniana izay eritreretinao hanana fanontaniana lehibe mba vokany, ny mpivady ny anjara-fanontaniana rehetra izay eritreretinao hanana mba vokany lehibe, ary ny iray hafa ny fanontaniana roa izay mba hevitrao tsy maninona. Mihazakazaka ny fanadihadiana fanandramana tamin'ny MTurk ho fizahan-toetra ny fanontaniana.
Ahoana ny haben'ny ny tapa-ampahany vokany dia afaka mamorona anao? Moa ny tsy miovaova na mifanohitra vokany?
Ahoana ny haben'ny ny tapa-vokany dia anareo rehetra afaka mamorona? Moa ny tsy miovaova na mifanohitra vokany?
Nisy fanontaniana iray mba vokany eo amin'ny mpivady izay tsy mihevitra ny baiko ho zava-dehibe?
[ , ] Fanorenana ny asan'ny Schuman sy Presser, Moore (2002) mamaritra ny lafiny samy hafa ny fanontaniana mba vokany: additive sy subtractive. Raha mifanohitra sy ny tsy fiovaovana vokatra dia novokarina ho toy ny vokatry ny namaly 'evaluations ny zavatra roa raha oharina amin'ny samy izy, additive sy subtractive ireo vokatra vokarina, rehefa namaly natao mora kokoa ny lehibe kokoa ao anatin'ny rafitra izay no nametraka ny fanontaniana. Vakio ny Moore (2002) , dia planina sy mihazakazaka ny fanadihadiana fanandramana tamin'ny MTurk mba maneho additive na subtractive vokany.
[ , ] Christopher Antoun sy ny mpiara-miasa aminy (2015) nampianatra ny fianarana mampitaha ny tsy hanahirana santionany efatra samy hafa azo avy amin'ny aterineto fiantsoana ho miaramila loharanom-: MTurk, craigslist, Google AdWords sy Facebook. Mamorona fanadihadiana tsotra sy handray mpandray anjara amin'ny alalan'ny roa, fara fahakeliny isan-karazany amin'ny aterineto fiantsoana ho miaramila loharano (mety ho samy hafa izy ireo loharanom-baovao avy amin'ny loharanom-baovao efatra ampiasaina ao Antoun et al. (2015) ).
Ampitahao ny vola lany isan-miaramila vaovao, eo amin'ny lafiny vola sy ny fotoana, eo amin'ny loharanom-baovao isan-karazany.
Ampitahao ny fifehezan 'ny santionany azo avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany.
Ampitahao ny hatsaran'ny tahirin-kevitra eo amin'ny santionany. Fa ny hevitra momba ny fomba tsara handrefy angona avy namaly, jereo ny Schober et al. (2015) .
Inona no tiany loharanom-baovao? Nahoana?
[ ] YouGov, ny aterineto ara-tsena fikarohana mafy orina, nitarika-tserasera biraom-pifidianana ny tontonana ny tokony ho 800.000 namaly ao amin'ny UK, ary nampiasa Mr. P. mba mialoha ny vokatry ny Vondrona Eoropeana kevi (izany hoe, Brexit) izay ny UK mpifidy hifidy na hijanona in na mandao ny Vondrona Eoropeana.
Misy tsipiriany momba ny antontanisa YouGov modely eto (https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/). Manodidina niteny izy, YouGov partitions mpifidy ho karazana mifototra amin'ny 2015 ankapobeny fifidianana fifidianana safidy, taona, toetra, lahy na vavy, daty ny resadresaka, ary koa ny Faripiadidiam-hiainany etỳ. Voalohany, dia nampiasa rakitra nangonina avy amin'ny YouGov panelists mba maminavina, anisan'ireo izay mifidy, ny ohatry ny olona tsirairay karazana mpifidy hifidy izay mikasa handeha. Tombanan'ny izy ireo taham-pahavitrihana ny tsirairay karazana mpifidy amin'ny alalan'ny fampiasana ny 2015 ny fifidianana British Fianarana (BES) taorian'ny fifidianana face-to-face fanadihadiana, izay nampanan-kery taham-pahavitrihana avy ny fifidianana horonana. Farany, dia maminavina firy ny olona misy ny tsirairay mpifidy karazana ao amin'ny mpifidy mifototra amin'ny farany Fanisam-bahoaka sy ny isan-taona Mponina Survey (amin'ny sasany koa vaovao avy amin'ny BES, YouGov Ny valin'ny fandinihana natao avy any amin'ny fifidianana solombavambahoaka, ary ny vaovao mikasika ny isan'ny olona nifidy antoko tsirairay isaky ny Faripiadidiam-).
Telo andro talohan'ny fifidianana, YouGov naneho ny teboka roa nitarika ho Ilaozy. Ny alina nialoha ny fifidianana, ny fitsapan-kevitra nampiseho akaiky loatra ny miantso (49-51 Mitoera). Ny farany teo dia ny andro mialoha fianarana 48/52 manohana ny Tomoera (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Raha ny marina, izany tombantombana nahatratra ny vokatra farany (52-48 Ilaozy) efatra isan-jato hevitra.
Ampiasao ny fanadihadiana tanteraka fahadisoana rafitra resahina ato amin'ity toko ity ny hanombana izay mety ho lasa ratsy.
YouGov ny valin taorian'ny fifidianana (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) dia nanazava hoe: "Toa ao amin'ny ampahany lehibe noho ny taham-pahavitrihana - zavatra izay ny voalazanay teny rehetra ho zava-dehibe ny vokatry ny mahay mandanjalanja toy izany hotetehina hazakazaka. Ny taham-pahavitrihana modely niorina, amin'ny ampahany, amin'ny namaly na efa nifidy tamin'ny fifidianana ankapobeny farany sy ny taham-pahavitrihana ambony haavon'ny fa ny fifidianana ankapobeny sosotra ny modely, indrindra ao amin'ny Avaratra. "Ve izany manova ny valim-ampahany (a)?
[ , ] Manorata simulation mba hampisehoana tsirairay ny fanehoana fahadisoana ao Sary 3.1.
Mamorona toe-javatra izay hadisoana ireo hanafoana ny avy raha ny marina.
Mamorona toe-javatra izay ny fahadisoana trotraka ny tsirairay.
[ , ] Ny fikarohana ny Blumenstock sy mpiara-miasa (2015) tafiditra fanorenana ny milina fianarana modely izay afaka mampiasa tahirin-kevitra nomerika soritry ny fanadihadiana mialoha valinteny. Ankehitriny, ianao dia hanandrana ny toy izany koa amin'ny hafa dataset. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) hita fa tia Facebook afaka mialoha olona toetra sy ny toetra. Mahagaga, ireo faminaniana mety ho marina kokoa noho ny an'ny namany sy ny mpiara-miasa (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Vakio ny Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , ary maka tahaka Sary 2. ny angon-drakitra azo ampiasaina eto: http://mypersonality.org/
Ankehitriny, maka tahaka Sary 3.
Farany, hizahanao toetra ny modely ao amin'ny Facebook ihany angona: http://applymagicsauce.com/. Ahoana tsara no miasa ho anao?
[ ] Toole et al. (2015) fampiasana antso antsipirihany rakitsoratra (CDRs) avy amin'ny finday mba mialoha aggregate fironana tsy an'asa.
Ampitahao sy mifanohitra ny famolavolana ny Toole et al. (2015) miaraka amin'ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Mihevitra ve ianao fa tokony hisolo nentim-paharazana CDRs fanadihadiana, hameno azy ireo na tsy azo ampiasaina mihitsy ny governemanta ny manara-maso tsy fananana asa politika? Nahoana?
Inona no porofo fa handresy lahatra anao fa CDRs afaka mahasolo tanteraka nentim-paharazana fepetra ny tahan'ny tsy fananana asa?